ဂိုးတွေ ဆက်တိုက်သွင်းပြနေတဲ့ အီဂါလိုကို မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အပြီးသတ်ခေါ်ယူဖို့ နီးစပ်နေ – Sports A2Z
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ပွဲထွက်လူစာရင်းမှာ ပါဝင်လာခဲ့တဲ့ ပွဲတိုင်းမှာ ဂိုးသွင်းယူပြနိုင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ဂျီးရီးယားတိုက်စစ်မှူး အိုဒီယွန် အီဂါလိုကို အငှားစာချုပ်နဲ့ ခေါ်ယူထားရာကနေ အပြီးသတ်ခေါ်ယူသွားဖွယ်ရှိကြောင်း နည်းပြ အိုလီဂန်နာ ဆိုးလ်ရှားက ချီးကျူးမှုတွေနဲ့ အရိပ်အမြွက် ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
အသင်းအတွက် ၈ ပွဲ ပါဝင်ကစားပြီးချိန်မှာ ၄ ဂိုး သွင်းယူထားခဲ့ပြီး သူ့လိုပဲ ဇန်နဝါရီ ခေါ်ယူမှုဖြစ်သူ ကွင်းလယ်လူ ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ်နဲ့အတူ ခြေစွမ်းပြသနိုင်ခဲ့တဲ့ အီဂါလိုအတွက် နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားက သဘောကျနေပြီး သူ့အလုပ်သူ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အရည်အသွေးပြည့်ဝသူလို့ အမည်တပ်ခဲ့ပါတယ်။
“အိုဒီယွန်ဟာ ဒီအသင်းကို ရောက်လာကတည်းက လုပ်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့ အရာတွေများခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး သူလည်း ဒါကို ပျော်နေပုံပါပဲ”လို့ အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူးဟောင်းတစ်ဖြစ်လဲ နည်းပြဖြစ်သူက ဆိုခဲ့ပြီး တစ်ပွဲပြီးတစ်ပွဲ ပိုကောင်းလာခဲ့တဲ့ နိုင်ဂျီးရီးယားသားအနေနဲ့ လာမယ့်ရာသီမှာ အသင်းကို ချန်ပီယံလိဂ်ကစားခွင့်ကိုလည်း ကူညီပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယူဆနေပါတယ်။
Odion Ighalo withaspecial goal that deserved to have an audience. pic.twitter.com/AbJscPtcrP
— The Man Utd Way (@TheManUtdWay) March 12, 2020
“သူက တိုက်စစ်မှူးကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဂိုးသွင်းကောင်းသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အပိုတွေ လုပ်ဖို့ စဉ်းစားသူမဟုတ်ဘဲ ကစားကွက် ဖန်တီးဖို့ထက် ဂိုးသွင်းဖို့ နေရာမှာပဲ ရှိနေတတ်သူပါ။ သူ့အလုပ်က ဂိုးသွင်းဖို့ဆိုတာ သူသိထားပြီး အထောင်တိုက်စစ်နေရာကနေ အသင်းရဲ့ ဆုံချက် ဖြစ်နေဖို့ အမြဲအဆင့်သင့်ဖြစ်နေခဲ့တာပါ”လို့ ဆိုးလ်ရှားက ဆိုပါတယ်။
Odion Ighalo out here doing keepy-uppies before his goals and Ole absolutely loves it ? pic.twitter.com/Bb8Ttrdswj
LASK နဲ့ပွဲမှာ ဘောလုံးကို သုံးချက်လှလှပပ တော့ပြပြီး လေးချက်မြောက်မှာ ဂိုးကန်သွင်းရယူသွားခဲ့တဲ့ အလုပ်က အရည်အသွေးအမြင့် လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီး သူ့အတွက် နေရာလွတ်ကို သူကိုယ်တိုင် ဖန်တီးသွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဒီလိုမျိုးအဆုံးသတ်မှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် မိမိတို့အနေနဲ့ ပျော်ရွှင်ဂုဏ်ယူမိကြောင်း နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားက ပြောကြားသွားခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
UNICODE: မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးရဲ့ ပှဲထှကျလူစာရငျးမှာ ပါဝငျလာခဲ့တဲ့ ပှဲတိုငျးမှာ ဂိုးသှငျးယူပွနိုငျခဲ့တဲ့ နိုငျဂြီးရီးယားတိုကျစဈမှူး အိုဒီယှနျ အီဂါလိုကို အငှားစာခြုပျနဲ့ ချေါယူထားရာကနေ အပွီးသတျချေါယူသှားဖှယျရှိကွောငျး နညျးပွ အိုလီဂနျနာ ဆိုးလျရှားက ခြီးကြူးမှုတှနေဲ့ အရိပျအမွှကျ ပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။
အသငျးအတှကျ ၈ ပှဲ ပါဝငျကစားပွီးခြိနျမှာ ၄ ဂိုး သှငျးယူထားခဲ့ပွီး သူ့လိုပဲ ဇနျနဝါရီ ချေါယူမှုဖွဈသူ ကှငျးလယျလူ ဘရူနို ဖာနနျဒကျဈနဲ့အတူ ခွစှေမျးပွသနိုငျခဲ့တဲ့ အီဂါလိုအတှကျ နညျးပွ ဆိုးလျရှားက သဘောကနြပွေီး သူ့အလုပျသူ အကောငျးဆုံးလုပျဆောငျနိုငျတဲ့ အရညျအသှေးပွညျ့ဝသူလို့ အမညျတပျခဲ့ပါတယျ။
“အိုဒီယှနျဟာ ဒီအသငျးကို ရောကျလာကတညျးက လုပျပွနိုငျခဲ့တဲ့ အရာတှမြေားခဲ့ပွီဖွဈပွီး သူလညျး ဒါကို ပြျောနပေုံပါပဲ”လို့ အသငျးရဲ့ တိုကျစဈမှူးဟောငျးတဈဖွဈလဲ နညျးပွဖွဈသူက ဆိုခဲ့ပွီး တဈပှဲပွီးတဈပှဲ ပိုကောငျးလာခဲ့တဲ့ နိုငျဂြီးရီးယားသားအနနေဲ့ လာမယျ့ရာသီမှာ အသငျးကို ခနျြပီယံလိဂျကစားခှငျ့ကိုလညျး ကူညီပေးနိုငျလိမျ့မယျလို့ ယူဆနပေါတယျ။
“သူက တိုကျစဈမှူးကောငျးတဈယောကျဖွဈပွီး ဂိုးသှငျးကောငျးသူတဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။ အပိုတှေ လုပျဖို့ စဉျးစားသူမဟုတျဘဲ ကစားကှကျ ဖနျတီးဖို့ထကျ ဂိုးသှငျးဖို့ နရောမှာပဲ ရှိနတေတျသူပါ။ သူ့အလုပျက ဂိုးသှငျးဖို့ဆိုတာ သူသိထားပွီး အထောငျတိုကျစဈနရောကနေ အသငျးရဲ့ ဆုံခကျြ ဖွဈနဖေို့ အမွဲအဆငျ့သငျ့ဖွဈနခေဲ့တာပါ”လို့ ဆိုးလျရှားက ဆိုပါတယျ။
LASK နဲ့ပှဲမှာ ဘောလုံးကို သုံးခကျြလှလှပပ တော့ပွပွီး လေးခကျြမွောကျမှာ ဂိုးကနျသှငျးရယူသှားခဲ့တဲ့ အလုပျက အရညျအသှေးအမွငျ့ လှုပျရှားမှုဖွဈပွီး သူ့အတှကျ နရောလှတျကို သူကိုယျတိုငျ ဖနျတီးသှားခဲ့တာဖွဈကွောငျးနဲ့ ဒီလိုမြိုးအဆုံးသတျမှုတှေ ပွုလုပျနိုငျခဲ့တဲ့အတှကျ မိမိတို့အနနေဲ့ ပြျောရှငျဂုဏျယူမိကွောငျး နညျးပွ ဆိုးလျရှားက ပွောကွားသှားခဲ့တယျလို့ သိရှိရပါတယျ။